अनलाइन भ्वाइस रेकर्डर - तपाईंको ब्राउजरबाट अडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
अनलाइन भ्वाइस रेकर्डर
तपाईंको ब्राउजरबाट अडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
अनलाइन भ्वाइस रेकर्डरले तपाईंलाई ब्राउजरमा सिधा माइक्रोफोनबाट अडियो रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ। तपाई फोन, ट्याब्लेट वा डेस्कटपबाट ध्वनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ, जबसम्म योसँग समर्थित ब्राउजर छैन।
अडियो रेकर्डि .हरू फेरि प्ले गर्न सकिन्छ र MP3 फोनको रूपमा तपाईंको फोन, ट्याब्लेट वा डेस्कटपमा बचत गर्न सकिन्छ। एमपी comp कम्प्रेसन ढाँचाले ठूलो अडियो गुणवत्ता दिन्छ जबकि तपाईंको अडियो रेकर्डि .को फाइल आकार कम राख्दछ।
हाम्रो भ्वाइस रेकर्डरको साथ तपाईंको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ: कुनै अडियो डाटा इन्टरनेट मा पठाइएको छैन, आवाज वा आवाज कि तपाईं रेकर्ड तपाईंको उपकरण कहिल्यै छोड्दैन। अधिक जान्नको लागि तल "डेटा ट्रान्सफर छैन" सेक्सन जाँच गर्नुहोस्।
हाम्रो आवाज रेकर्डर नि: शुल्क छ, त्यहाँ कुनै दर्ता आवश्यक छैन र त्यहाँ कुनै उपयोग सीमा छैन। तपाईं यसलाई जतिसक्दो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईं चाहानु भए जति धेरै अडियो रेकर्डि .हरू बचत गर्नुहोस्।
योसँग एक सुन्दर र प्रयोग गर्न सजिलो ईन्टरफेस छ जहाँ तपाईं रंगीन ध्वनि तरंगहरू बिस्तारै बिस्तारै देख्नुहुनेछ।
हामी आशा गर्दछौं तपाईंले यसको आनन्द लिनुभयो!
हामी अनलाइन उपकरणहरू विकास गर्दछौं जुन तपाईंको उपकरणमा स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ। हाम्रा उपकरणहरूले तपाइँका फाइलहरू, अडियो र भिडियो डेटा इन्टरनेटमा पठाउन आवश्यक छैन तिनीहरूलाई प्रक्रिया गर्नका लागि, सबै कामहरू ब्राउजर द्वारा नै गरिन्छ। यसले हाम्रो उपकरणहरू छिटो र सुरक्षित बनाउँछ।
जबकि अन्य अनलाइन उपकरणहरूले फाईलहरू वा अन्य डाटा टाढाको सर्भरहरूमा पठाउँछन्, हामी गर्दैनौं। हामीसँग, तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ!
हामी यसलाई भर्खरको वेब टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर प्राप्त गर्छौं: HTML5 र WebAsorses, कोडको एक रूप जुन ब्राउजरले चलाएको हो जुन हाम्रो अनलाइन उपकरणहरूलाई नजिकैको मूल गतिमा कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिँदै।
एमपी ((अन्यथा MPEG-1 अडियो तह III वा MPEG-2 अडियो तह III को रूपमा चिनिन्छ) एक अडियो कम्प्रेसन फाइल ढाँचा हो। यसले हानिकारक डेटा कम्प्रेसन प्रयोग गर्दछ, यसको मतलब यसले अडियो डेटाको ईन्कोडको अंश खारेज गर्दछ। एमपी comp कम्प्रेसन द्वारा खारेज गरिएको अडियो डेटा ध्वनीसँग मेल खान्छ जुन धेरै मानिसहरूले सुन्न सक्दैनन्। यस प्रकारको कम्प्रेसनमा गुणस्तरको नोक्सानी समावेश छ, तर एउटा कि धेरै जसो व्यक्तिले ध्यान नदिने गरी जान्न सक्छ। एमपी comp कम्प्रेसनले सामान्यतया %०% र%%% फाईल आकार घटाई बीचमा प्राप्त गर्दछ।
के तपाईको माइक्रोफोनले काम गरिरहेको छैन?
तपाईको माइक्रोफोन अनलाइन जाँच गर्न माइक्रोफोन टेस्ट जाँच गर्नुहोस् र तपाईको माइक्रोफोन मुद्दाहरूको समाधान गर्नका लागि विभिन्न उपकरण र अनुप्रयोगहरूमा समाधान खोज्नुहोस्।
तपाईंको MP3 रेकर्डि otherलाई अन्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्
एमपी Con कन्भर्टर अनलाईनले तपाईंलाई MP3 फाइलहरूलाई WAV, M4A, FLAC, OGG, AIFF ढाँचामा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। यो नि: शुल्क हो र कुनै फाईल ट्रान्सफर आवश्यक छैन!
© 2021 itself tools. सबै अधिकार सुरक्षित।